व्यपार / व्यवसाय Archives - Page 33 of 47 - Purbeli News
घट्यो सुनको मूल्य, कति छ ? हेर्नुहोस्
काठमाडौं / बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा तीन सय रुपैयाँ घट्दै प्रतितोला ५६ हजार रुपैयाँमा झरेको छ । सन हिजो प्रतितोला ५६ हजार तीन सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । आज सुनको मूल्य घट्दा चाँदीको मूल्यको मूल्य भने यथावत छ । आज पनि चाँदी प्रतितोला सात सय ३५ रुपैयाँमा नै कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
काठमाडौं / नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य यथावत छ । आज पनि सुन प्रतितोला ५६ हजार तीन सय रुपैयाँमा नै कारोबार भइरहेको छ । सुन हिजो पनि सोही मूल्यमा काराबोर भएको थियो । त्यस्तै, आज चाँदीको मूल्य पनि यथावत छ । चाँदी आज प्रतितोला सात सय ३५ रुपैयाँ नै कारोबार भइरहेको छ । चाँदी हिजो पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जना...
ढाकामा भबिष्य बुन्दै ग्रामिण महिला
तेह्रथुम / कोशी राजमार्गमा पर्ने सिधुवा बजारको ठ्याक्कै पारी छ, हमरजुङ । तमोरनदी र तेिलया खोलाको काखमा रहेको यो गाउँ पाकृतिक सुन्दरताले भरिपुर्ण छ । यही प्राकृतिकको काख सँगै हरियाली बनपाखामा गाईबस्तुहरु सँगै घाँस,दाउरा,मेला,पर्ममा रमाउनु छथर गाउँपालिका २ हमरजुङका धनमाया तोलाङगीको लागी नौलो कुरा थिएन । वस्तुभाउ हेर्ने, खानापकाउने, सरसफाई गर्ने ल...
काठमाडौं / नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य थप घटेको छ । आज सुन तोलामा थप एक सय रुपैयाँ घट्दै प्रतितोला ५६ हजार तीन सय रुपैयाँमा झरेको छ । सुन हिजो ५६ हजार चार सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा पाँच रुपैयाँ घट्दै प्रतितोला सात सय ३५ रुपैयाँमा झरेको छ । चाँदी हिजो प्रतितोला सात सय ४० रुपैयाँमा कारोबार भएको नेप...
काठमाडौ / नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य घटेको छ । आज सुन तोलामा एक सय रुपैयाँ घट्दै प्रतितोला ५६ हजार चार सय रुपैयाँ कायम भएको छ । सुन हिजो प्रतितोला ५६ हजार पाँच सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । आज सुनको मूल्य घटेपनि चाँदीको मूल्य भने यथावत छ । आज पनि चाँदी प्रतितोला सात सय ४० रुपैयाँमा नै कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
सुनचाँदीको मूल्य कति छ आज ?
काठमाडौं / नेपाली बजारमा आज पनि सुनचाँदीको मूल्य यथावत छ । आज सुन प्रतितोला ५६ हजार पाँच सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । सुन शुक्रबार पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, आज चाँदीको मूल्य पनि स्थिर छ । चाँदी आज पनि प्रतितोला सात सय ४० रुपैयाँमा नै कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
च्याउका सबै परिकारका साथ इटहरीमा खुल्याे कञ्चनकोशी फुड सेन्टर
सुनसरी । इटहरीमा अब च्याउका बिभिन्न परिकार एकै ठाँउमा पाइने भएको छ । च्याउ स्वास्थ्यको लागी पनि निकै फाईदाजनक भएकाले पनि यसको परिकार प्रति सबैको मुख रसाउने गर्छ । यसैलाई मध्यनजर गदै इटहरी ६ स्थित कञ्चनकोशी फुड सेन्टरले च्याउका ६ आईटम एकै ठाँउ उपलब्ध गराउने भएको हो । इटहरीमा संम्भवत पहिलो पटक च्याउबाट मात्र बनेका परिकार पाइने यस फुड सेन्टरले च्य...
क्यासिनो संचालनमा अन्योल
बुटवल / रुपन्देहीको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र भैरहवास्थित ‘मिनि क्यासिनो’ संचालनमा अन्योलता देखिएको छ । पर्यटन विभागले नयाँ परिपत्र गरेपछि क्यासिनो संचालनमा अन्योलता र विवाद देखिएको हो । ह्याप्पी आवर प्रालिद्वारा संचालित उक्त मिनी क्यासिनो विगत तीन वर्षदेखि बिना इजाजत संचालनमा थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गत असार १९ गते उक्त मिनि क्यासिनो संचा...
पथरी / मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाले गाउँवासीलाई उच्च करको भार लगाएको भन्दै नेपाली कांग्रेस लगायतका सात दलले करको दलले करको दर संसोधन गर्न माग गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस,सङ्घीय समाजवादी फोरम,सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च,राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी,नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल,सङ्घीय लिम्बूवान पार्टी र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले गाउँपालिकामा...
काठमाडौं / तारा एअरले शुक्रबार साँझ आफ्नो नयाँ ट्विन अटर वायुयान भित्र्याएको छ । उक्त विमान सेसेयल्स, माल्दिभ्स, भारत हुँदै काठमाडौं अवतरण गराइएको हो । नयाँ विमानको चालकदलमा वरिष्ठ क्याप्टेन प्रभाकर प्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ क्याप्टेन पवन सिंह नगरकोटी तथा प्राविधिक सहयोगार्थ ईन्जिनियर जगत लामा रहेका छन् । चालकदलका साथमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राध...